Ahoana ny fomba hiarovana ny findainao amin'ny hackers | Avy amin'ny Linux
Na ny valanaretina SARS-CoV-2 dia nanosika anao handefa telefaona an-trano, na raha te hahatsapa ho voaro kokoa ianao ao an-tranonao na any amin'ny birao dia tokony ho fantatrao izany ny telefaona tsy misy tariby ary VoIP lasibatry ny mpanao heloka bevava an-tserasera maro mitady hanafika orinasa na olon-tsotra izy ireo.
Mariho tsara fa a cyberattack dia mety hiteraka fatiantoka lehibe ho an'ny orinasa, ary koa ny famoahana vaovao mafampana avy amin'ny orinasa na avy amin'ny mpanjifa. Noho izany, mba hisorohana azy ireo tsy hihaino ny resakao dia tokony hanaraka torohevitra azo ampiharina izay azonao ampiharina ianao.
2 Ka azo antoka ve ny telefaona tsy misy tariby?
3 Ahoana ny fomba hiarovana ny findainao amin'ny fanafihana tsy misy tariby
3.1 Fepetra manokana ho an'ny telefaona VoIP
4 Fepetra fanampiny hafa
Ireo taloha tariby mbola velona izy ireo amin'ny orinasa sy trano maro, na dia niova tsikelikely aza ny telefaona finday sy VoIP. Na eo aza ny taonany, izy ireo dia mbola iray amin'ireo fomba fifandraisana matanjaka indrindra sy tsara indrindra amin'ny fiantsoana lavitra.
Na izany aza, telephony raikitra ihany koa nivoatra izy somary vitsy tao anatin'ny folo taona lasa. Avy amin'ny telefaona taloha ka hatramin'ny telefaona tsy misy tariby ankehitriny. Ny teknolojia tsy misy tariby dia nanjary mora vidy kokoa ary matotra mandra-pahaizany mamindra ny telefaona mahazatra.
Miaraka amin'ny telefaona vaovao tsy misy tariby anao sorohy ny fetran'ny tariby, afaka mifindra amin'ny toerana ilainao rehefa manao antso, raha mbola eo ambanin'ny fandrakofana ny haitao tsy misy tariby ampiasaina ianao.
Ny tariby tariby taloha dia azo zahana amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny telefaona, saingy azo atao koa amin'ny tsipika tsy misy tariby sy VoIP maoderina. Na dia marina aza fa ny telefaona tsy misy tariby amin'izao fotoana izao dia tsy nampiasaina intsony Onjam-peo AM mandefa am-pahibemaso ary tsy misy fiarovana (mety ho sakanana izy ireo) na dia ny fifandraisana amin'ny haitao nomerika voaaro aza mba hiarovana azy amin'ny sofina mikorisa.
Ka azo antoka ve ny telefaona tsy misy tariby?
Tsy misy izy ireo tsy misy azo antoka 100%, ireo mpanao heloka bevava amin'ny cyber dia mahita fahalemena sy karazana fanafihana vaovao mba hanatanterahana ireo fanafihana ireo. Ary koa, arakaraka ny haitao ampiasain'ny telefaona tariby, dia mety ho mora kokoa na tsy mora ny manentsina resaka.
Raha ny telefaona finday misy anao dia tsy mamaritra hoe manana izany teknolojia DDS (Digital Spread Spectrum) na DECT (Digital Enhanced Cordless Technology), avy eo ianao dia hamindra amin'ny haitao analog (na dia tsy misy tariby aza).
Raha sendra misy analogy dia eo alohan'ny telefaona tsy misy tariby ianao marefo indrindra. Na dia azo antoka kokoa aza ireo nomerika, saingy tsy afaka amin'ny fanafihana izay ahafahan'ny antoko fahatelo mihaino ny resaka ataonao. Ny pentestera sy mpanao heloka bevava an-tserasera sasany dia nahavita nanakana ny resaka nifanaovan'i DECT toy ny nataon'ny mpanamboatra finday tsy misy tariby ankehitriny.
Mba hahafahana manakana ny resaka dia mila rindrambaiko sy fitaovana manokana fotsiny ireo mpanafika. Ho fanampin'izay, ny fitaovan'ny rindrambaiko dia loharano misokatra ary maimaim-poana, noho izany dia tsy sarotra ny mahazo izay ilainao amin'ny fitsikilovana. Na dia mandeha amin'ny alàlan'ny fananana solosaina PC misy karatra tambajotra tsy misy tariby manokana ho an'ny DECT fotsiny aza ny fitaovana ilaina dia ilaina fa tsy mora ny mahita na mora vidy).
DECT dia mivoatra ampiharina ankehitriny fepetra fiarovana vaovao amin'ny fenitra hahatonga azy io ho azo antoka kokoa. Saingy tsy ny telefaona tsy misy tariby rehetra no handray azy ireo, ka mety misy maodely marefo maro.
Ahoana ny fomba hiarovana ny findainao amin'ny fanafihana tsy misy tariby
Matetika, raha tsy ny orinasanao no mitantana fampahalalana sarobidy indrindra, tsy mahasoa ny mividy ny fitaovana ilaina mba hitsikilovana lasibatra sasany. Saingy tsy tokony hampiala anao amin'ny fahafinaretana izany, satria raha vao misy cybercriminality manana fitaovana ilaina dia azony ampiasaina amin'ny maro amin'ireo niharany izany.
Tombony iray hafa amin'ity karazana haitao ity ny fanakanana ny angon-drakitra fifandraisana DECT izay ilaina amin'ny cybercriminal ity manaraka mankany amin'ireo toerana anaovanao ny telefaona tsy misy tariby. Ny zavatra tsara dia tsy dia lehibe ny fandrakofana an'ireo, ka sarotra kokoa ny maka ny signal.
Na eo aza izany, toro-hevitra vitsivitsy izay tokony ho ao an-tsainao dia:
Raha manana telefaona tsy misy tariby analog ianao dia mifamadiha amin'ny DECT azo antoka kokoa. Raha paranoida ianao dia ampiasao telefaona mifehy tsara kokoa ho an'ireo antso saro-pady indrindra na ilay VoIP voafafa.
Ao amin'ny birao na trano lehibe dia apetraho eo afovoan'ny trano ny telefaona. Hananasarotra kokoa ny fanakanana ireo fambara ireo. Tsy tokony ho akaikin'ny rindrina mihitsy io misy trano mifanila aminy, na mifanakaiky amin'ny rindrina ivelany amin'ny trano.
Fepetra manokana ho an'ny telefaona VoIP
ny Telefaona VoIP Mampiasa ny protokolon'ny Internet IP izy ireo hanatanterahana fifandraisana fa tsy tariby mahazatra amin'ny telefaona toy ny mahazatra. Noho izany dia ilaina ny fampiharana fepetra hafa samihafa hanandramana hanatsara ny fiarovana ny tambajotrao:
Ny fampiasana ny router miaraka amin'ny VPN hanafenana ny fivezivezena ao anaty tamba-jotra dia mety ho safidy lehibe amin'ny fiarovana ny serasera VoIP.
VLAN misaraka no azo ampiasaina amin'ny telefaona amin'ny tamba-jotra ampiasainao hijerena.
Mampiasà vola amin'ireo orinasa fiarovana an-tserasera izay afaka manao fanaraha-maso fiarovana amin'ny tambajotrao hanamafisana izay fahalemena mety hisy.
Ampiofano ny mpiasanao, satria rehefa azo antoka ny rafitra, ny fomba tsara indrindra ahazoana izay tadiavinao dia ny mandeha amin'ilay rohy malemy indrindra: ny mpampiasa.
Fepetra fanampiny hafa
Tsy zava-dehibe fotsiny ny fiarovana ny fitaovana, fa koa mitazona fepetra fiarovana ho an'ny mpiasao sy ho anao any amin'ny birao. Noho izany, torohevitra ny hanajana andiana fepetra fanampiny raha tsy misy vaksinina na fitsaboana mandaitra amin'ny Covid-19. Ireto fepetra fototra ireto dia mandalo:
Tazomy ny halaviran'ny fiarovana 2 metatra eo anelanelan'ny olona ary sorohy ny vahoaka.
Manaova saron-tava nekena isaky ny miasa ao an-trano misy olona maro na any ivelany raha tsy voatazona ny halaviran'ny fiarovana.
Fanasana tanana sy famonoana otrikaretina.
Fampiasana efijery fiarovana, fonon-tànana ary zavatra hafa raha ilaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana no hiarovana ny findainao amin'ny hackers
Denver dia hoy izy:
Mahavariana fa mety ho marefo ny zavatra rehetra misy ifandraisany amin'ny Internet, fantatra fa tamin'ity taona ity dia nisy ny fanafihana isan-karazany tamin'ny sehatra nomerika isan-karazany. Ambonin'ny zava-drehetra, ny vola crypto dia ireo izay nanafika indrindra tamin'ity taona ity, saingy tsy midika izany fa tsy mampita ny filaminana sy ny mangarahara. Farafaharatsiny mba izay no ampitain'ny sehatra cryptocurrency amiko https://www.mintme.com
Valiny tamin'i Denver
Misy kinova vaovao an'ny rafi-drakitra IPFS 0.7 itsinjaram-pahefana